နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးညီလာခံ WLB တောင်းဆို
Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ဒေသန္တရသတင်း > နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးညီလာခံ WLB တောင်းဆို
နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးညီလာခံ WLB တောင်းဆို	ဖနိဒါ	| ကြာသပတေးနေ့၊ ဇွန်လ ၂၈ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၃၇ မိနစ်	ချင်းမိုင်(မဇ္စျိမ) ။ ။ မီးရထားဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်သော အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၏ ထိုင်းနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေး ခရီးစဉ်တွင် အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ) WLB နှင့် ဘန်ကောက်မြို့တွင် ကြာသပတေးနေ့က တွေ့ဆုံခဲ့သည်။WLB နှင့် ပထမဆုံးအကြိမ် ပြုလုပ်သော ဆွေးနွေးပွဲတွင် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသမီး ညီလာခံ ကျင်းပပေးနိုင်ရေးနှင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ အတူတကွ အကောင်အထည် ဖော်သွားရန် စသည်တို့ကို တင်ပြခဲ့သည်ဟု WLB အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်တင်တင်ညို က ပြောသည်။“ပြည်တွင်းပြည်ပ အမျိုးသမီးတွေ ပိုမိုအားကောင်းလာအောင် အမျိုးသမီးညီလာခံကြီးတွေ ပြုလုပ်ချင်ပါတယ်။ အခုအချိန်ကနေ စပြီးတော့ အမျိုးသမီးတွေ အချင်းချင်းကြားမှာ အစည်းအဝေးတွေ၊ တွေ့ဆုံမှုတွေ ပုံမှန်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အနေအထားတခုကို သူတို့အနေနဲ့ စဉ်းစားပေးဖို့၊ ဖန်တီးပေးဖို့၊ အဲဒီညီလာခံကနေတဆင့် ဘယ်လို ဝိုင်းဝန်း လုပ်ဆောင်ကြမယ် ဆိုတာတွေ ဆွေးနွေးနိုင်အောင် အဲဒီလို ညီလာခံက လိုအပ်တယ်” ဟု မဇ္စျိမကို ပြောသည်။ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ အမျိုးသမီးများနှင့်၊ လွှတ်တော်အတွင်းရှိ အမျိုးသမီး ကိုယ်စားလှယ်များ အားလုံး ပါဝင်သည့် အဆိုပါ ညီလာခံမှ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ ရှိလာရန် စွမ်းအင်မြှင့်တင်ရေးများ ပြုလုပ်နိုင်ရေး၊ ဦးဆောင်မှု ကဏ္ဍများတွင် ဝိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ကြရေးများ ဆွေးနွေးမည်ဟု WLB က ဆိုသည်။ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း အနေနှင့်အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား တန်းတူရေးကို အလေးထားကြောင်းနှင့် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်လာမှု အခန်းကဏ္ဍများအပေါ် အသိအမှတ် ပြုကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု ဒေါ်တင်တင်ညိုက ပြောသည်။“ဦးအောင်မင်းက ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်တွေ ပိုပြီးတော့ မြန်ဆန်လာအောင် နှစ်ဘက်စလုံး ပါဝင်လာအောင် ကြားထဲ ကနေ တွန်းပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်း ပုံစံမျုိးတွေ ဖြစ်စေချင်တယ်။ အဲဒါလည်း ခုလက်ရှိ ကျမတို့ လုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ပဲလေ။ သူကလည်း အဲဒီလို ပြောတယ်ဆိုတော့ ပိုပြီးတော့ ကောင်းတာပေါ့။ ပိုပြီးတော့ အားဖြစ်စေတယ်” ဟု ဆိုသည်။ထို့ပြင် ဒုက္ခသည်များ ၎င်းတို့၏ ဆန္ဒအလျှောက် နေရပ်သို့ ပြန်မည့် အစီအစဉ်များ ပြုလုပ်ပေးရန်နှင့် ယင်းလုပ်ငန်းစဉ် များတွင် WLB အနေဖြင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့သည်ဟု ဒေါ်တင်တင်ညိုက ပြောသည်။ဤသို့ ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအပေါ် အားရကျေနပ်မှုရှိပြီး အစိုးရဘက်မှ ဆွေးနွေး ပြောဆိုမှုများသည် စစ်မှန်သည့် ဆွေးနွေးမှုဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ထားလိုကြောင်း ဒေါ်တင်တင်ညိုက ပြောသည်။ဆွေးနွေးပွဲတွင် WLB မှ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်တင်တင်ညို၊ သဘာပတိအဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်သောဒေါ်သင်းသင်းအောင်၊ မငိုင်ငိုင်း၊ အကြံပေး ဒေါ်ရှယ်လီဆိုင်း တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ကချင်ဒုက္ခသည်များကို ကူညီခွင့်ပေးရန် တင်ပြချက်အပေါ် ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းက အကူအညီအဖွဲ့များ ပေးနေကြောင်းနှင့် အကူအညီများ ရရှိရေးအတွက် ကချင် လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး အမြန်ဆုံး လုပ်ရမည်ဟုပြောဆိုခဲ့သည်။ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်သော ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့များသည် ရခိုင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေး ပါတီ ALP နှင့် ဘန်ကောက်မြို့ တွင် ဆက်လက် တွေ့ဆုံခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ရှေ့ဆက်လုပ်ရမည့် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလက ပြည်နယ်အဆင့် တွေ့ဆုံမှုတွင် မရှင်းလင်းသည့်ကိစ္စများ ဆက်လက် ဆွေးနွေးခဲ့သည်ဟု ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီ က ပြောသည်။လေးရက်တာအတွင်း ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်ရှိ အဖွဲ့အစည်းများစွာနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ရမှုများအပေါ် ကောင်းသည့် လက္ခဏာဆောင်ကြောင်း အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သည့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီ က ပြောသည်။“Positive (အပေါင်းလက္ခဏာ)ပေါ့နော်။ သမ္မတကြီးက တတိုင်းပြည်လုံး ငြိမ်းချမ်းချင်တယ်။ ကျနော်တို့ကလည်း ဒီကိစ္စ ကို အကောင်အထည် ဖေါ်ပေးတယ်။ ဖော်ပေးတာက စားပွဲဝိုင်းပေါ်မှာ ထိုင်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်တာ မဟုတ်ဘူး။ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများကလည်း စိတ်ရောကိုယ်ပါ လာပြီး ဆွေးနွေးကြတယ်ဆိုတော့ ဒီထက်ကောင်းတာ မရှိတော့ဘူး။ အင်မတန် အပြုသဘော ဆောင်တဲ့၊ အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုလို့ ကျနော်တို့ ပြောလို့ ရပါတယ်” ဟု မဇ္စျိမကို ပြောသည်။
ဆွေးနွေးပွဲများတွင် အကြီးတန်း စစ်ဘက် အရာရှိများ စေလွှတ်ပေးရန် KNU တောင်းဆို	အစိုးရ ငြိမ်းအဖွဲ့နှင့် UNFC တို့ နိုင်ငံရေး ဆက်လက် ဆွေးနွေးရန် သဘောတူ	နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှုများ အဆင့်သုံးဆင့်ဖြင့် လုပ်ဆောင်သွားမည်	သဘောထား မတိုက်ဆိုင်၍ ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းလျှောက်သူများ လမ်းကြောင်းနှစ်ခုခွဲ	ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းလျှောက်သူများအား မန္တလေးမှ ကချင်လူငယ်များ ကြိုဆို KNU ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမည်	အစိုးရ လက်နက်ကြီးဒဏ်ကြောင့် ရွာသား တဦး ပွဲချင်းပြီး သေဆုံး၊ သုံးဦးဒဏ်ရာရ	Who is Online
We have 82 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved